2 KỌRINT 6 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (2KỌR 6)
2 KỌRINT 6
Ma geenụ ntị nꞌihe Chineke na-ekwu, “Nꞌoge a na-anara mmadụ nke ọma ka akwa unu rutere m ntị. Ọ bụkwa nꞌụbọchị nzọpụta ka m nyeere unu aka.” Ya mere, ugbu a bụ oge Chineke chọrọ inyere gị aka. Taa ka Chineke jikeere ịzọpụta gị.
Anyị na-ebi ndụ anyị nꞌụzọ mmadụ ọ bụla na-agaghị achọpụta ntụpọ ọ bụla nꞌọrụ anyị si otu a taa Chineke ụta. Anyị achọkwaghị ka onye chọrọ ikwere nꞌOnyenwe anyị sụọ ngọngọ nꞌihi ụdị ndụ anyị na-ebi.
A na-eti anyị ihe otiti ọtụtụ mgbe. E tinyekwala anyị nꞌime ụlọ mkpọrọ dị iche iche. Ọtụtụ mgbe ka igwe mmadụ tikwara anyị ihe otiti. Anyị na-adọgbu onwe anyị nꞌọrụ. Ọtụtụ abalị anyị nọkwara nꞌime ịmụ anya. Anyị nọkwara ọtụtụ mgbe naerighị nri.
Anyị bụ ndị eziokwu na ndị ike Chineke dịnyeere. Ngwa agha anyị bụ ezi omume nke anyị ji alụso onye iro ọgụ, ya kwa ka anyị ji echedo onwe anyị.
Ụwa amaghị anyị, ma Chineke maara anyị. Ọ bụ ezie na anyị na ọnwụ na-anọ nso mgbe nile, ma lee anyị ka anyị dịkwa ndụ. A na-ata anyị ahụhụ, ma lee Chineke na-echebe anyị ka a hapụ igbu anyị.
Ọ̀ bụ nnwekọ dị aṅaa dị na-agbata onye Kraịst na ekwensu? Gịnị kwa ka onye kwere ekwe na onye na-ekweghị ekwe nwekọrọ?
Gịnị bụ ihe jikọtara ụlọ nsọ Chineke na arụsị? Nꞌihi na anyị onwe anyị bụ ụlọ nsọ Chineke dị ndụ. Ọ bụ Chineke kwuru sị, “M ga-ebi nꞌime ha, jegharịakwa nꞌime ha, m ga-abụkwa Chineke ha, ma ha onwe ha ga-abụkwa ndị nke m.”
Ọ bụ nke a mere Chineke ji kwuo sị, “Sinụ nꞌetiti ha pụta, wezuganụ onwe unu nꞌebe ha nọ. Unu emetụkwala ihe na-adịghị ọcha aka, mụ onwe m ga-akpọbatakwa unu.
2 KỌRINT 6:3
2 KỌRINT 6:5
2 KỌRINT 6:7
2 KỌRINT 6:9
2 KỌRINT 6:15
2 KỌRINT 6:16
2 KỌRINT 6:17